စားကြည့်….အားရှိတဲ့ …ဟောဒီက……….မလိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » စားကြည့်….အားရှိတဲ့ …ဟောဒီက……….မလိုင်
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Oct 30, 2013 in Education, How To.. | 20 comments
ကိုယ့်ရွာက လူတွေကို နည်းပညာလေးတစ်ခုလောက် လက်တို့ ပြီး ပြောပြရဦးမယ်..
လက်တို့ ပြီးတော့ ပြောတယ်ဆိုလို့ တော့ သိပ်စိတ်လှုပ်ရှားမသွားပါနဲ့ ….။
နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ နည်းပညာတိုင်း လျှို့ ဝှက်ချက်တွေ ရှိပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ပြောတဲ့ နည်းပညာက ကွန်ပြူတာတွေ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ မလိုပါဘူး…..
ဒါတွေ မပါလို့ အထင်တော့ မသေးလိုက်နဲ့ နော်…။
အိုင်တီခေတ်ကို ရောက်နေပြီ…ကမ္ဘာကြီးကို နည်းပညာတွေနဲ့ ဖန်ဆင်းပစ်လိုက်မယ်လို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ နည်းပညာရှင်တွေအထဲက ဒီနည်းပညာအောက်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ထိထားတယ်…တယ်ဆိုတာ
သူတို့ ကိုယ်တိုင်တောင် သိလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး….
ကျနော်တွေ့ ဘူးတယ်…စကားဝိုင်းဖွဲ့ ပြီဆို နိုင်ငံတကာ နည်းပညာတွေကို ရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ပြောပြီး၊ တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာ အရှိန်နဲ့ စကားပြောနေချိန်မှာ မျက်နှာက ဂုဏ်ယူနေတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ ….။
ဒီနည်းပညာအောက်မှာ တော်တော်များများထိထားကြတာတော့ သေချာတယ်…။
တော်ရုံ နည်းပညာလောက်လေးနဲ့ တော့ လွတ်နိုင်မယ်လို့ တော့ လျှော့မတွက်နဲ့ ၊ မရနိုင်ဘူး…။ ထိမှာလဲ။
သူလိုကိုယ်လို အဆင့်မပြောနဲ့ဘီလ်ဂိတ် လိုလူတောင် ထိနိုင်တယ်…။ တစ်ကယ်လို့ သူသာ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်ဆိုရင်ပေါ့လေ…
ဒါဖြင့် ဘာနည်းပညာလဲလို့ မေးရင်တော့ ပြောရမှာဘဲ…။
သိပ်တန်ဘိုးထားပြီး လူတိုင်းမစားနိုင်တဲ့မလိုင်။
မနက်တိုင်း လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ နံပြားတို့ပလာတာတို့ နဲ့ တွဲဖက်စားတဲ့ မလိုင်။
နွားနို့ ကို မလိုင်ဖြစ်လာအောင် ချက်တဲ့ မလိုင်ချက်နည်းပေါ့ဗျာ…။
ခင်မင်သူတစ်ချို့ က စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်…ကိုယ်ကလည်း ပြောချင်ပါတယ်…။
ဒါပေမယ့်လို့ တစ်ချို့ က ဒီနည်းပညာနဲ့စီးပွားရေး လုပ်နေကြတာ..။ ဖတ်ပြီးရင်တော့ ဆိတ်ဆိတ်နေပေါ့နော်..။
မလိုင်ချက်နည်းက အမှန်အကန်ချက်နည်းနဲ့ အကြံအဖန်ချက်နည်း ၂ခု ရှိတယ်ဗျ….အမြတ်များများလိုချင်လို့ ကြက်သားပေါက်စီကိုတောင် ကြွက်သားနဲ့အစားထိုးလုပ်နေချိန်မှာ ၊ အမြတ်နည်းနည်းနဲ့ ကောင်းကောင်း လုပ်လိမ့်မယ်၊
အမှန်အကန်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ရင်တော့ ကိုယ့်သဘောပေါ့ဗျာ…။
ခုပြောမယ့် မလိုင်ချက်နည်းက နို့ အစစ် ၁လီတာ ဘူး ၁ဘူးလိုတယ်…နောက်အဓိက အရေးကြီးဆုံးကတော့….
တစ်ရှုး တစ်လိပ်…အကောင်းဆုံးအဖြစ် ကျနော့် ဆရာမ သုံးတာကတော့ ရေအိမ်သုံး တစ်ရှုးပေါ့ဗျာ….။
ပထမ နို့ ကို မီးမျှင်းမျှင်းလေးနဲ့ ပွက်လေရုံလေး တည်ထားတာ…။
နို့ တွေ ဆူပွက်နေမှ တစ်ရှုး စက္ကူစလေးတွေကို ၁လက္မ အရွယ် ၊သို့ မဟုတ် ၁x၃ လက္မ အရွယ် အရှည်လိုက်လေးတွေ၊ အပိုင်းပိုင်း
အဖြတ်ဖြတ်လေးတွေ လက်နဲ့ ဖဲ့ ပြီး မျှင်းမျှင်းလေးဆူပွက်နေတဲ့ နို့ အိုးထဲကို ၄..၅ ဖဲ့ ထည့်ပြီး ၂မိနစ် ၃ မိနစ်စောင့်ပြီးမှ နောက် စက္ကူ ၄..၅ ဖဲ့ ထပ်ထည့်တာ….ဒီလိုလုပ်သွားလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ စားသုံးသူတို့ အကြိုက် သိပ်ကောင်းတဲ့ မလိုင်အိုးကြီး ဖြစ်သွားတော့တာ…။
မီးမပြင်းဘို့ နဲ့ စိတ်ရှည်ဘို့ ဘဲ လိုတာပါ….။
ဒီနည်းနဲ့ ချက်တာကို သိပြီး ၊ နောက်မနက် မလိုင်မှာစားတဲ့ သူတွေရဲ့ မျက်နှာကို ကျနော် အကဲခတ်ပြီး…သေချာကြည့်တာ..။
စိတ်ထဲမှာ ရိပ်မိလေမလား စိုးရိမ်တာ…အံ့သြတယ်ဗျာ…တစ်ချို့ များ ၂ပွဲတောင် ဆက်စားတာ…။
ကျနော့်ဆရာမ အမား က နပ်တယ်…ကျနော်မျက်နှာ အရိပ်အကဲ ကြည့် ပြီး
“ မင်း စိုးရိမ်နေတာလား…စိတ်မပူနဲ့ …သူတို့ ဒီဆိုင်မှာ မလိုင်စားလာတာ…နှစ်၂၀ လောက်ရှိနေပြီ” တဲ့..။ ပြီးရော…။
လက်တွေ့ မှ ယုံတယ်ဆိုစမ်းကြည့်ပေါ့…။
ကျနော်တောင် စိတ်ကူးတာ...ဂေဇက် ရွာသူရွာသား ညီအကို မောင်နှမတွေ တွေ့ ဆုံပွဲမှာ မလိုင်နဲ့ ပေါင်မုန့် ကြွေးမလားလို့ ….။
မလိုင် ချစ်သူအပေါင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါပြီ…။
kz နဲ့ဗုံဗုံ အတွက် အထူးဦးစားပေးစနစ်။
စာဖတ်သူအပေါင်း ဂုဏ်ယူသော မျက်နှာပေးများဖြင့် မလိုင် စားနိုင်ကြပါစေ…။ ဒချိ ဒချိ
( ကော်မန့် တွေ တခုချင်း စာမပြန်နိုင်ပေမယ့် ပို့ စ်လေးကိုတော့ လက်ဆောင်အဖြစ် အရင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်)
kyaw swar kaung has written 80 post in this Website..
ပန်းချီကို လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက အရိုက်နှက်ခံပြီး သင်ယူဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်.. 3D Animation အတွက် ပန်းပုရုပ်လေးတွေ ဖန်တီးပါတယ်..။ ကဗျာရေးတယ်..စာရေးပါတယ်..။ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ စာကို အသည်းအသန်ဖတ်ပါတယ်..။
View all posts by ကျော်စွာခေါင် →
ဆဋ္ဌမ အာရုံရဲ့ ကောင်းမှု့ ကြောင့် မလိုင်သိပ်မုန်းတာ။ (ဂန်ဗီရ ဝတ်ထုတွေ ဖတ်လွန်းလို့ အဲ့ဒီ ဆဋ္ဌမ ရလာတာ-စကားချပ်)။ အမှန်က ဈေးကြီးလွန်းလို့ရယ် လက်လှမ်းမမှီတဲ့ အစားအစားတစ်ခုမို့ပါ။ပြီးတော့ အချဉ်ကြိုက်တဲ့လူမိုက်ကို မစွဲဆောင်နိုင်လို့ပါ။ အဲ့ဒီထောင်ချောက်ကနေလွတ်သွားတယ်။
” ကျနော်တောင် စိတ်ကူးတာ..
ဂေဇက် ရွာသူရွာသား ညီအကို မောင်နှမတွေ တွေ့ ဆုံပွဲမှာ
မလိုင်နဲ့ ပေါင်မုန့် ကြွေးမလားလို့ ….။
မလိုင် ချစ်သူအပေါင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါပြီ ”
အို မသိဘူး ။
တစ်ရှုးပေပါ ပါလဲ ချားမှာပဲ ။
( သုံးပြီးသား တစ်ရှုး မဟုတ်ရင် ပြီးတာပဲ )
ကျွေးမယ့်သူကသာ အသင့်ပြင်ထားပါ ။
ချားမယ့်သူကတော့ ရယ်လဒီပဲ ။
ဟီ ဟိ ၊ လာမယ့် တွေ့ဆုံပွဲကို မဝေဝေ ရဲ့ သံလျှင်ခြံမှာ လုပ်မလားလို့ ။
အဲဒါဆို ၊ ဦးပါ ရဲ့ သင်္ကြန် / ဝါဆို ထမင်း ဆိုတာရော ၊
ဦးခေါင် ရဲ့ တစ်ရှုးမလိုင် ရော ၊
ကြိုက်တာ လုပ်စားလို့ ရမယ် ။
ဟီ ဟိ ၊ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာပါ ။
အောင်မလေးဗျာ …နောက် ကိုမလိုင် ဘယ်တော့မှ မစားတော့ ဘူး။
အမှန်အကန် နည်း လေးလဲမျှပါဦး ဗျ
အင်အင်းကုန်း စက္ကူ မလိုင်ကျမှ ကေဇီ အတွက် အထူးတဲ့လား ခေါင်။
ဒမာတော့ ထမင်းဆိုင်က သူ့ကော်မန့်လေးမြင်ပြီး စိတ်မကောင်းလို့ သတ်သတ်လွတ် ဟင်းစပ် တစ်ပတ်လောက် ဖွင့်မလား စိတ်ကူးနေတာ။
ဒီနေ့အဖို့တော့ ကေဇီ ထမင်း မစားနိုင်တော့ပါဘူးလေ။
ခုတော့ မလိုင်ဆရာဂျီးပါ ရသေးသကိုးဗျ…
ဆြာဝန်​က​ပြောတယ်​…​နော်​ရှီးတဲ့..၁၄ ကီလို ကျ​အောင်​၀ိတ်​ချရမယ်​တဲ့…​သွေးထဲမှာလဲအဆီများတယ်​တဲ့…အာ​ဂျောင့်​ အဆီအစိတ်​ တစ်​သက်​လုံး​ရှောင်​ရ​တော့မယ်​…..ချိတ်​​တောင်​​ကောင်းဖုး……ဒီ​နေ့..ဘဇွန်​ထုပ်​ မီးကင်​ပဲစားရ​တော့မယ်​….ကျဥ
တစ်သျှူး မလိုင် ကျမှ အထူးဦးစားပေးတဲ့..
” ခေါင် ” တစ်သျှူးမလိုင် ဆိုပြီး ဆိုင်ဖွင့်စားမယ်..
အိမ်မှာ နွားမဂျီး4ကောင်တောင်ရှိတာ..
နွားမနဲ့ တစ်သှူးလိပ်ရှိရင် အလုပ်ဖြစ်ပြီ..
မနှင်းဖြူ မှန်မှန်ပြော says:
အမယ်ငှီး …… ငါစားခဲ့တာ မလိုင်မှတ်လို့ .. တစ်ရှူးတွေဖြစ်နေတာကိုး
စားတော့ဘူး စားတော့ဘူး …….
မေမြို့ရောက်ရင် မလိုင် လိုက်ဝယ်ရတာအမော .. မန်းလေးပြန်ေ၇ာက်ရင်
၃၅လမ်းတံတားအောက်က မလိုင်အီကြာသွားစားရတာ အမော ..
တော်ပြီ …..စိတ်နာဒယ်.. တစ်သက်လုံးစားတော့ဝူး………..
တိန်… ရေအိမ်သုံးတစ်ရှုးဒဲ့ …. :-(
အောင်မြတ်ငေး အရင်ကတော့ကြားဖူးတယ် တစ်ရှုးတွေဆိုတာ အခုတော့သေချာဘီ ချားဒေါ့ဝူး ချားဒေါ့ဝူး အိမ်မှာပဲ လုပ်ချားဒေါ့မယ်။ ကွကိုယ်ပဲစိတ်ချရဒယ်။
ဒီတော့ မလိုင်ဆို ဆိုင်မှာ တစ်ခါမှ မစားဖြစ်ပါဘူး…
no non negative says:
I already stop eating since last 10 years ago.
so lucky haha
နွား နို့ကု လား ကြီး တွေ လက် ကြီး နဲ့ ထဲ့ မွေ တာ မြင် က တဲ က ပေါ့
ရွှေမိုးတိမ်လေး ကို ပါ ဦး စား ပေး ထဲ ထည့် လိုက် ပါ လားးD
ဦးခေါင်….ပြင်ဦးလွင်က တချို့မလိုင်တွေက ပန်းနုရောင်ဖျော့ဖျော့လေးတွေဗျ…ဆိုတော့ကာ …တစ်ရှုးကွာတာလားတော့မသိ…..အဟိဟိ……
အောင်မယ်လေး ဗုံရေ ဗုံကလေးပြောမှ မက်ချိထဲအကွင်းလိုက်ညင်တွားဒလိုဘဲ။ ဆြာဆောရိုးတေဘီပေါ့အေ
ဒီလိုနဲ့ စားစရာ သောက်စရာတွေ လည်း တဖြည်းဖြည်း ရှားပါးလာပီနော်
ကျွန်တော် စားဖို့ တွေးနေတာတောင် တွန့်သွားတယ်
တော်ပြီ ၃၅ လမ်းက မလိုင်အီကြာကွေး စားတော့ဘူး ဗျာ
စက္ကူက စားယင် သေဒတ်ဒလား ???
သေဒတ်ဘူးဆို အေးချေးဘဲ …
မလိုင်ထဲ ဘာထည့်ထည့် အေးချေး ခလေးမွေး …
အဓိက မသေ ပီးဒါဘဲ …
အဲ .. ဒါမယ့် .. ဟိုလို ရွံစရာဂျီးဒွေဒေါ့ ထည့်နဲ့ပေါ့လို့ ….